फागुनमा क-कसको बज्दैछ ‘पञ्चेबाजा’ ? « Ramailo छ
फागुनमा क-कसको बज्दैछ ‘पञ्चेबाजा’ ?
प्रकाशित मिति : Nov 30, 2017
समय : 8:33 am
फागुन ११ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोक्दै फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ को दुई फष्टलुक सार्वजनिक भएको छ । सौगात मल्ल, कर्म, बुद्धि तामाङ, सिर्जना सुब्बा र जस्मिन श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मले,एक गाउँका तीन पात्रको कथा प्रस्तुत गर्दछ । फिल्मलाई घनश्याम लामिछानेले निर्देशन गरेका हुन् ।
न्यू भेनस फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा राजेश शाहीको लगानी छ । फिल्ममा प्रकाश घिमिरे, सबिन बास्तोला, प्रमिला तुलाचन, देशभक्त खनाल, युवराज भण्डारी, तेज गिरी र राजेश शाही लगायतको अभिनय छ । निर्देशक लामिछानेले ‘फिल्मको नाम अनुसार फिल्म पनि मौलिक बनाएको बताएका छन् । उनले यसअघि ‘धौली’ र ‘अग्नीदहन’ निर्देशन गरेका छन् । यता ‘कवच’, ‘मेरो मनको साथी’, ‘बीच बाटो’ निर्माण गरिसकेका छन् निर्माता शाहीले पनि राम्रो फिल्म बनाउन कुनै पनि कसुर बाँकी नराखेको बताएका छन् ।
सारा गुरुङ सहनिर्माता रहेको फिल्ममा कालीप्रसाद बाँस्कोटा र विकास चौधरीको संगीत छ । यस्तै प्रदिप भारद्वाजको लेखन, हरि घले लामाको छायांकन र दीर्घ खड्काको सम्पादन छ ।